Imibhalo kaChristopher Faust mayelana Martech Zone |
Imibhalo nge UChristopher Faust
UChristopher ubhekele konke ukumaketha komhlaba wonke, ukuthuthukiswa kwamabhizinisi, namasu okuya ezimakethe ku I-Qvidian. Njengomphathi wezokukhangisa womhlaba wonke onolwazi nobuchwepheshe obujulile besizinda emkhakheni wezobuchwepheshe, uChristopher uletha irekhodi eliqinisekisiwe nezinkampani ezikhula kakhulu.
NgoLwesibili, ngoJuni 9, i-2015 NgoLwesibili, ngoJuni 9, i-2015 UChristopher Faust
Emvelweni wanamuhla wokuthengisa, izinselele eziningi zingavimbela abaholi bezentengiso ekusizeni amaqembu abo ukufeza izinhloso zabo. Ukusuka ekuthengiseni okusha okuhamba kancane okunciphisa isikhathi kuya ezinhlelweni ezihlanganisiwe, abathengisi abasebenzisa ukuthengisa basebenzisa isikhathi esiningi emisebenzini yezokuphatha nesikhathi esincane ukuthengisa empeleni. Ukuze kusheshiswe ukukhula, kunciphise ukungasebenzi kahle kwenhlangano futhi kunciphise inzuzo ekuthengisweni, abaholi bezentengiso kumele basungule izinqubo ezisheshayo nezishintshashintshayo. Izincwadi zokudlala zedijithali zibalulekile